MADAALE: 33 Sanno Jir Kala Bar Noloshiisa Ka Ciyaarayay Horyaalka Premier League Welina U Dheelaya Koox U Tartameysa Horyaalka | Laacib.net
MADAALE: 33 Sanno Jir Kala Bar Noloshiisa Ka Ciyaarayay Horyaalka Premier League Welina U Dheelaya Koox U Tartameysa Horyaalka
September 17, 2019 Balaleti 1
James Milner ayaa ku riyaaqay waayo ciyaareed oo aad u dheer oo ku qaatay horyaalka Premier League oo ah kan ugu xiisaha badan dunida.
17 sannadood ka hor ayuu ka soo bilaabay kooxda Leeds United markaasoo uu u saftay kulankiisii ugu horeysay oo ay 4-3 kaga badiyeen kooxda West Ham, waqtigaas waxay da’diisa aheyd 16 sannadoo, 10 bilood iyo lix maalmood.
Milner labo sannadood ayuu la joogay Leeds United ka hor inta uusan afar sannadood ku qaadanin Newcastle United, labo sanno ayuu sidoo kale u ciyaaray Aston Villa ka hor inta uusan heshiis 26 milyan ginni ugu biirin Manchester City sannadii 2010.
Intii uu joogay City waxa uu labo jeer ku guuleystay koobka Premier League (2011/12 iyo 2013/14) isagoo boos joogta ah markaas ka helay xulka qaranka England.
Heshiis xor ah ayuu ugu wareegay Liverpool sannadii 2015, tan iyo markaasna waxa uu kooxda u noqday xiddig boosas badan u buuxiya isagoo qaab ciyaareed joogta ah u soo bandhigayay Reds.
Taageerayaasha Liverpool ayaa aad u jecel 33 jirkaan kaasoo mar walba dadaal boqolkiiba 100 ah bixiya marka uu garoonka soo galo, waxaana uu qeyb libaax leh ka qaatay hanashadoodii Champions League ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Kama muuqato wax hoos u dhac ah inkastoo uu 33 sanno jir yahay.
Milner ayaa sannadkii labaad oo isku xiga xagaagan ku guuleystay tartanka taam ahaanshaha ee ciyaartoyda Liverpool ee ay galaan ka hor inta uusan xilli ciyaareedka bilaabanin.
Sida uu sheegay qoraaga kubada cagta Richard Jolly, Milner waxa uu haatan yahay ciyaaryahan Premier League ah kala bar noloshiisa.
Waxa uu dhashay 4tii bishii Janaayo 1986, waxa uu kulankiisii ugu horeysay ee Premier League uu saftay 6154 maalmood ka dib markii uu dhashay, 6154 maalmood ka dibna waa shalay oo 16ka September aheyd wuxuu isku diyaarinayaa kulanka Champions League ee Napoli.
[irp posts=”199387" name=”Emile Heskey: Steven Gerrard Iyo Frank Lampard Waxay Shaqo Tababarenimo Ku Heleen Inay Cadaan Yihiin, Madowga Cidna Ma Dalacsiiso””]